Liverpool Waa Inay Diyaarsato Beddelka Mohamed Salah Iyo Sadio Mane – Wargeys Kasoo Baxa Magaalada Liverpool Oo Sababo Macquul Ah Soo Bandhigay | Hohad News
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa loo soo jeediyey inay diyaarsato beddelka labadeeda xiddig ee Mohamed Salah iyo Sadio Mane oo isku-darka goolasha ay xili ciyaareedkan u dhaliyeen dhamaan tartamada ay yihiin 40 gool.
Liverpool ayaa si aah ah ugu tiirsan Mane iyo Salah, balse markii uu Virgil van Dijk kusoo biiray ayay mar kaliya isku rogtay naadi u muuqday inuu dheelli-tiran yahay oo ku-tiirsanaanta afka hore oo kaliya aan ku koobnayn.
Salah oo ahaa laacibkii xili ciyaareedkii hore ku guuleystay xiddiga Premier League iyo kabta dahabka ahba, waxa uu ku fashilmay in toddoba kulan uu shabaqa gaadhi kari waayo, balse Klopp ayaa aaminsan in 20-ka gool ee dhamaan tartamada ah ee uu dhaliiyey ay weli ka dhigayaan hoggaamiyaha naadiga ee lama taabtaanka ah.
Sida uu qoray wargeyska Liverpool Echo ee kasoo baxa magaalada Liverpool ee ay ka dhisan tahay kooxda Klopp, waxa si degdeg ah loogu baahan yahay in kooxdu ay diyaarsato beddelka labadan laacib oo ay ku tiirsanaantoodu lugooyo ku noqon doonto xilli ciyaareedka dambe.
Wargeysku waxa uu sheegay in May 12 illaa June 1, ay Liverpool u noqon doonaan waqti ay ka farxiso jamaahiirteeda amaba ay niyad jab ku sagootiyaan xili ciyaareedka, sababtuna waa in tartanka Champions League iyo horyaalka Ingiriiska ee Premier League ay labaduba xilliyadaas dhamaan doonaan.
Liverpool Eco waxa uu tilmaamay in Liverpool heysato caqabad aanay gelin tan iyo sannadkii 1984 oo ah mid ay gacanteeda isku gelisay oo ay wax walba gacanta u gelisay Mane iyo Salah, balse nasiib wanaag kale ayuu xusay inay tahay in aanay labada laacib midna ka qayb geli doonin tartamada UEFA Nations League iyo Copa America balse ay tartanka qaramada Qaaradda Afrika tegayaan.
Gini Wijnaldum, Van Dijk, Jordan Henderson iyo Trent ALexandere-Arnold ayaa dhamaantood tegi doona UEFA Nations League oo isreeb-reebkiisa la ciyaarayo, balse sidoo kalena tartan qaaradeedka Copa America ayay u baqooli doonaan Alisson, Fabinho iyo Roberto Firmino.
Saddexda laacib ee reer Brazil ayaa la joogi doona xulkooda June 14 illaa July 7, waana waqti xaasaasi ah oo ay wax walba soo gaadh karayaan.
Africa Cup of Nations oo isaguna bilaabmi doona kaddib finalka Koobka Champions League, ayaa waxa qaab naf hurnimo ah u ciyaari doona Salah iyo Mane oo uu saaran yahay culays ah inay dalalkooda guulo u horseedaan, sidoo kalena Naby Keita ayey suurtogal thay in dalkiisa Guinea uu ka qayb-galo oo uu hoggaamiye u noqdo, waxaana uu tartani soo xidhmi doonaa July 19 oo ah xilliga ay naadiyadu u baxayaan kulamada saaxiibtinimo ee naadiyadu ku tagaan Maraykanka.
Haddaba wargeysku waxa uu dooddiisa ugu soo jeediyey Klopp inuu hawlgal adag ka sameeyo suuqa oo uu ciyaartooyo cusub ka raadsado maadaama Salh iyo Mane ay xilli dambe ka imanayaan Afrika, sidoo kalena uu Firmino waqti badan ku maqnaanayo Brazil.
Haddii dhaawacyo soo gaadhaan, amaba qaab nasasho la’aan ah ay u ciyaaraan, waxa uu wargeysku tilmaamayaa inay saamayn ku yeelan doonto bandhiggooda xili ciyaareedka dambe.
Si kastaba ha ahaatee, sababaha wargeyska oo ah kuwo macquul ah oo xili ciyaareedka dambe iyo mustaqbalka naadigaba saamayn ku yeelanaya, ayaan la ogeyn in kooxdu ay qaadan doonto iyo in kale, balse waxa xilliyada ay maqan yihiin hoggaamiyeyaasha afka hore nooqn doona Divock Origi iyo Daniel Sturridge oo aan la hubin inay sii joogi doonaan iyo inay iska tegi doonaan.